Alahady 2 B Paka (Jn 20,19-31) 08/04/2018 | FKMP
Alahady 2 B Paka (Jn 20,19-31) 08/04/2018
INONA NO FOMBA HATAOKO MBA HAHAVELONA NY FINOAKO?
Tsy hoe isan’andro tokoa isika Kristianina no makany am-piangonana miara mivavaka fa isaky ny Alahady fankalazana an’i Kristy nitsangana ho Velona. Tsy hadinontsika ihany koa fa ny andro Alahady tokoa no voalaza tamin’ny Vaovao Mahafaly androany fa nisehoan’i Kristy Velona tamin’ireo Mpianany Izy. Isaky ny mankalaza ny Sorona Masina isika dia miseho amintsika koa i Kristy. Midika koa izany fa tsy raharaha manokana na fiainana manokana ny Finoana fa iombonana amin’ny hafa. Mila ny Tenin’Andriamanitra sy ny Finoan’ny hafa isika mba ho tena velona sy hivelona ny Finoantsika isika.
Ny Teny nolazain’i Kristy voalohany tamin’ireo mpianany rehefa nitsangana ho Velona Izy dia ny hoe : Ho aminareo anie ny Fiadanana – ny Fiadanako no homeko anareo, ny Fiadanako no havelako ho anareo. Mitondra hafaliana sy fahasambarana tokoa izany Fiadanana homeny antsika izany. Tsy fiadanana araka ny heverin’izao androntsika izao anefa izany Fiadanana homen’i Kristy izany. Ny Fiadanany dia ilay hafaliana vokatry ny Fitsangana-kovelona. hafaliana tonga aorian’ny tahotra sy fijaliana ary fisalasalana. Ny Hafaliana vokatry ny Paka dia tsy azo mora foana, na eo no eo, tsy ilay tsy fisian’ny olana mihitsy, tsy ilay hoe tsy marary mihitsy, tsy ilay hoe mety daholo izay hatao rehetra. Fa ilay Hafaliana avy aorian’ny olana na ny tahotra, ilay Hafaliana tonga rehefa niaritra ny mafy sy ny mahamay. Ilay Hafaliana tonga aorian’ny fahakiviana manoloana ny fahafatesan’i Kristy. Zovy tokoa moa no tsy hatahotra, hatahotra an’Andriamanitra, hatahotra ny hafa, hatahotra fijaliana, hatahotra ny tsy fahampiam-bola, tahotra ny heo tsy haharaka ny zava-misy, tahotra ny tsy fahaizana, tahotra ny ho antitra, ny ho faty, maro ireo karazan-tahotra mety mahazo antsika. Saingy i Kristy manome toky antsika fa hanome ny Fiadanany ho antsika. Moa ve tsapantsika tokoa izany Fiadanana homen’i Kristy antsika izany?
Tsy velona ny trondro raha esorina ao anaty rano. Tsy afaka mitombo sy miaina araka ny tokony ho izy ny vary raha tsy mahazo nofontany sy tsy mahazo rano. Isika olombelona koa tsy afaka ho velona raha tsy misy rivotra sy rano. Tsy afaka hitombo ny Finoana sy hanana fahatokisana an’Andriamanitra velively isika raha toa ka tsy mifanerasera Aminy matetika, raha toa ka tsy mihaino sy mamaky ny Teniny, raha toa ka tsy mandray sy miaina ny Sakramenta ary tsy miara-miombona amin’ny Eglizy, raha toa ka tsy mba mandray anjara matetika amin’ny Soron’i Kristy.
Previous Post: Sabotsy manaraka ny Paka B (Jn 21,1-14) 07/04/2018
Next Post: Alarobia Paka 2B (Jn 3,16-21) 11/04/2018